Wasaarada adeega bulshada DF oo bilowday dhismaha xeer u doodaya xuquuqda haweenka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 1, 2013 5:52 b 0
Muqdisho, Aug 1, 2013 – Wasaarada adeega bulshada iyo horumarinta Soomaalya ayaa hadda wadda xeer qabyo-qoraal ah, kaasi oo ay wasaaradu ku xadidayso xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin waxbarashada, Caafimaadka, iyo siyaasaadda.
Xeerka Qabyo-qoraalka ah ee hadda dhismihiisu socdo waxaa ku xusan in haweenku ay xaq u leeyihiin Baarlamanka %30 boqolkiiba, halka ay hadda haystaan %16 boqolkiiba taasi oo muujinaysa in aan la dhamaystirin xauquuqda haweenka dalka.
Wasaarada adeegada bulshada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gudbin doonto dhowaan xeerkaasi, iyadoo baarlamanka si cad loo hor-dhigi doono doorka saxda ah ee dumarka looga baahnaa in ay Baarlamanka ku yeeshaan.
Sidoo kale xeerku wuxuu u doodayaa xuquuqda kale ee haweenka, sida Waxbarashada, Caafimaadka, Siyaasada iyo weliba dhaq-dhaaqyo kale oo muhiim u ah dalka oo Dumarka ay ka qeyb qaadan karaaan.
Agaasimaha guud ee waaxda haweenka wasaarada adeega bulshada Soomaaliya Maxamed Cumar Nuur oo la hadlay Radio Daljir wuxuu sheegay in xeerka ay ku jiraan qoddobo dhowr ah, isla markaasna ay dhamaystiri doonaan iyagoo kadib u gudbin doona Baarlamanka dalka.
Dhegeyso Maxamed Cali axmed oo waraystay Agaasimaha waaxda haweenka Maxamed Cumar